Taariikhda My Butros » 3 Great Talooyin Si Abuuridda The Best Online Profile Dating
Last updated: Oct. 20 2020 | 2 min akhri
Maalmahan, shukaansiga online ayaa noqonaya mid aad iyo aad u badan oo caan ah. Oo haddii aad u maleynaysid in ay ku saabsan, waxa macno. Jadwalka shaqada ka duulaan iyo noloshooda gaar ahaaneed mashquul ka baxo waqti aad u yar in ay la kulmaan qof jidkii hore ee dhahaya. Laakiin shukaansiga online waxaa sahlan ayaa sheegay in ka badan soo gabagabeeyay. Furaha shukaansiga online guul been in aad profile.
Sawirka Profile - Image Tani waxay dejinaysaa heerka. Oo iyagu ha noqon daacad ah, waxay noqon kartaa wax jebiyo heshiis qaar ka mid ah a. Haddii aan qiran ama ma, jiidashada jirka ka ciyaartaa qayb wayn in saaxiibkiisa ka iman kara. Dooro sawir in Bandhigyo hantida ugu wanaagsan oo aan aad u muujinta. Sidoo kale, hubi in aad dhoola in aad sawir ku qoslayay kuwo aad ugu Yeedha. My talo waa in ay ka fogaadaan shots "muuhiyey" sida ay u muuqdaan in ay noqon cheesy. Sidoo kale, fogaadaan darbo koox sida aad ku lumo sawirka. Talo waxa uu si aad sawir weyn ee profile. Waxaan sidoo kale ku talineynaa in geliyaan wax ka badan hal sawir. In aad photos dacwadu, si xor ah ku darto darbo group, salaaxid darbo, iwm. Waxaa jirta odhaah caan in uu aado "sawir qiimihiisu yahay kun erey" sidaas ha sawiro aad samayn hadal ah.
About Section Waxaad - Iyadoo aad profile sawirka waa hanti muhiim ah in la online aad shukaansi profile, aad content kaalin muhiim ah iyo sidoo kale. Ka hor intaadan saxiixin-up for site shukaansi kasta, Samee liis ah hiwaayadaha aad, danaha, awoodahaaga, iyo daciifnimo. Marka liiska taasi dhamaato, dooratid waxyaabaha ugu muhiimsan in aad diyaar u wadaagaan yihiin. Hubi in aad faah-faahiso hiwaayadaha iyo danaha sida aad rabto doonaa saaxiibkiisii ​​ka iman kara in ay la wadaagaan qaar ka mid ah. Sidoo kale, waxaa ka mid ah sida aad ku qaadato wakhtigaaga aad maadaama ay tani ku siin doonaa saaxiibkiisii ​​iman kara fikrad si loo arko haddii aad tahay fasiraad. Ugu dambayntii ahna arrinta ugu muhiimsan, hubi in aad tahay 100% daacad. Haddii aan daacad, ma waxaad ka heli doontaa adiga saaxiibkiisa Naf.
Maxay Rabaan Waxaad In Section Partner A - Haddii goobta shukaansi aad is-qorto u leedahay qaybtan ama ma, aad u baahan tahay inaad hubaal waxaa ka mid ah in aad profile. Ka fikir waxa ugu muhiimsan ee aad si in la Wadaage. Qor wax kasta laga sifooyinka qiyamka iyo anshaxa in tusaalayaal ku saabsan sida aad rabto in aad noloshaada la qaataan lammaanahaaga. Ha lagu baajin haddii aad liiska waa dheer ee mar aad bilowdo in aad ka koobanahay qaybtan, aad ka saari doontaa tayada in aan a "ka sameeyaan ama u burburin". My talo marka curinta qaybtan waa in ay diiradda saaraan naftaada iyo lamaanahaaga mustaqbalka on siman. profile A kula content aad u culus naftaada on muujinaysaa in aad tahay anaani, taas bedelkeeda profile ah in soo bandhigtay wax-content aad u badan oo ku saabsan waxa aad raadinayso kunoqon karo ah saaxiibkiisa mustaqbalka. Sidoo kale, Hubso inaad akhrisid caddayn. Hingaad khalad aad u ma heli doono meel aad u fog on website kasta oo shukaansi. Ugu dambayn, inta hawlgalka oo dhan shukaansiga online, aad u hubiso in aad ku raaxaysatay! Waayo-aragnimo Tani waa inay ahaato mid Nuurin, xiiso badan, iyo ka badan.